अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी २ चिज, नत्र घातक बन्नेछ !
हा’मिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मि’साएर खाने गर्छौ । किनकी कुनै चिजहरु यसका साथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ । तर यस्ता चिज पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानुहुदैन । मि’साएर खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या देखा पर्छ ।
आज हामी तपाईंलाई खाने-पिउने यस्ता केहि चीजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन सँगै खानु हुँदैन । जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग संग कहिल्यै पनि खट्टा फल खानु हुँदैन।यी चिजसँगै खादा पच्दैन जसको कारण पेट गडबड हुन्छ। यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चीजको साथ खान हुँदैन ।
जस्तै धेरै मानिसहरू दहीसँग मा’छा खान्छन् तर त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने माछाले तातो बनाउछ । आयुर्वेदका अनुसार कुखुरा र खजूर कहिले पनि सँगै खान हुँदैन, यो हानिकारक पनि हुन सक्छ । अब दूधको बारेमा कुरा गरौं । जस्तो तपाईंलाई थाहा होला दूध एक जनावरको प्रोटीन हो, फ्राइड गरिएको, त्यसैले भुटेको खाना खानाले यसले प्रतिक्रिया देखाउन सक्छ ।
धेरै व्यक्तिहरू दूध चियामा नुन हालेर खाँन्छन् तर मँ तपाईंलाई भन्छु कि यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन । दुधमा नुन मिल्नाले मिल्क प्रोटिन जम्दछ । र पोषणमा तत्वमा कमी आउँछ । दुधको साथमा फलफुल खानुहुँदैन । त्यसो गर्दा दुधमा रहेको क्याल्शियमले फलहरूको एन्जाइम सोस्दछ र यस कारणले शरीरले फलहरूबाठ प्राप्त हुने पोषण तत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। यस बाहेक दाल, हरियो तरकारी, मूला र अण्डा, मासु र पनीर जुन चीज खाए पनी दूध पिउनु हुँदैन । यसले तपाईंको पाचन शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्छ ।
जहिले पनि दिमागमा राख्नुहोस् कि महलाई तातो बनाएर पनि मह खानु हुँदैन । एकै साथ मह ,नौनी घी र मह खानु हुँदैन । धेरै मानिसहरूलाई उमालेको अण्डामा निचोड्ने लेबो खाने मन पर्छ, तर म तपाईंलाई भन्छु कि यो कहिले पनि हुँदैन । त्यसो गर्नाले स्वास्थ्यलाई ठूलो नोक्सान पु¥र्‍याउन सक्छ । र त्यहाँ हृदयघातको जोखिम पनि हुन सक्छ ।
दु’बाेकाे यस्ताे फा’इदा दि’नमा कति पट’क र कसरी खा’ने ! दुबो हामी सबैको लागी परिचित झार हो । यसलाई नदेख्ने सायदै कोही होलान । यो हाम्रो घर वरिपरिको आगनमा उम्रिरहेको हुन्छ । हिन्दु धर्ममा यसलाई विभिन्न पाठपुजा गर्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसैले यसको महत्व छुट्टै छ । यसलाई आयुर्वेदमा औषधी बनाउनको लागी प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
दुबो हाम्रो स्वास्थ्यको लागी निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । यसको महत्वको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा नभएकाले यसलाई हामी एउटा घाँसको रुपमा मात्र लिने गर्छौं । यदि हामीलाई यसको उपयोगको बारेमा थाहा हुने हो भने यो हाम्रा लागी विभिन्न रो’गको औष’धि हुन्छ ।
प्रोटिनको अभावमा तपाइकाे शारीरिक विकास राम्रोसँग हुँदैन । प्रोटिन अभाव भएको सङ्केत थाहा पाउन सके त्यसको समाधानको उपाय अपनाउन सकिन्छ । प्रोटिनको मात्रा शरीरलाई पु’गेको छ वा छैन थाहा पाउनु: शरीरलाई स्व’स्थ राख्न फ्याट, सो’डियम, पो’टासियम, का’र्बोहाड्रेट, सुगर, भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन र प्रोटिनको अत्यन्त आवश्यकता पर्छ ।
कपाल कमजोर हुनु: तौल कम हुनुका साथै प्रोटिनको कमीले कपाल पनि कमजोर हुँदै जान्छ । कपाल पलाउन पनि प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले प्रोटिनको कमीले कपाल कमजोर हुने, कपालमा हाँगा पलाउने, झर्ने जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छ । त्यस्तै, नङ कमजोर हुनुले पनि शरीरमा प्रोटिनको कमी भएको सङ्केत गर्छ । श’रीरमा एडेमा(पानी फोका) हुनु: प्रोटिनको कमीले एडेमा अर्थात् शरीरको केही भागमा पानी फोका देखिन सक्छ ।
प्रोटिनले शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलित राख्ने भएकाले यसको कमी भएमा शरीरमा पानीको मात्रा असन्तुलित हुन गई यस्ता समस्या देखा पर्छन् । विशेषतः हातपाउमा यस्तो समस्या देखिन सक्छ । अन्य समस्या: छाला फुस्रो हुनु अथवा छालामा धर्सा देखिनु पनि प्रोटिनको कमीका कारण हुन सक्छ । शरीर कमजोर भएको महसूस हुनु, निद्रा धेरै लाग्नु, घाउ लागेको छ भने ठीक हुन धेरै समय लाग्नु बारम्बार भोक लाग्नु, मांसपेशी र जोर्नी दुखिरहनु, शरीरमा ऊर्जाको कमी हुनु, टाउको दुख्नु, रिङ्गटा लाग्नु, थकानको महसूस हुनु आदि प्रोटिनको कमीले हुने समस्याहरू हुन् ।
क’लेजोले पर्याप्त मात्रामा फलाम तत्व सञ्चय गर्न नसक्दा यसरी प्लाज्मा प्रोटिन कम हुने हो । फलाम तत्वको कमी भएर हेमोग्लोबिनको उत्पादन घट्छ र रक्तअल्पता भएर आँखा सुन्निन्छ । थकान: प्रोटिन कम हुँदा शरीर थकित हुन्छ किनभने शरीरले पर्याप्त ऊर्जा पाउँदैन । शरीरमा चिनीको मात्रा प्रोटिनको सहयोगमा व्यवस्थित हुन्छ । यसैले प्रोटिनको पर्याप्त मात्रा भएन भने दिमागले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन र थकान महसुस हुन्छ । मांसपेशी क्षय हुनुले प्रोटिनको कमी देखाउँछ । प्रोटिनको अभाव भएमा मांसपेशीको आकार कम हुन थाल्छ ।
भोक लाग्नु प्रोटिनको आभावमा भोक धेरै लाग्छ । विसन्चो हुनु: स्वस्थ मानिसमा पनि प्रोटिनको आभाव भएको अवस्थामा बारम्बार बिरामी पर्न थाल्छ । शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन आवश्यक पर्छ । रातो र’क्तकोष, सोतो रक्तकोष र एन्टिबडीको आधार प्रोटिन हो । यी सबै पक्षले मिलेर शरीरमा रो.गाणु नाश गर्ने काम गर्छन् । झाडापखाला: झाडापखाला लाग्नु भनेको पाचन प्रणाली बिग्रनु हो । यस अवस्थामा आन्द्राले पोषक तत्व राम्रोसँग अवशोषित गर्न सकेको हुँदैन र शरीरमा प्रोटिनको कमी हुनजान्छ ।
Previous खुट्टाको पैताला भतभत पोल्ने भएको छ भने यस्ता रोगको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ । अपनाउनुहोस यी घरेलु उपचार !
Next तपाईलाई थाहा छ हाम्रै घर आगनमा पाइने तुलसी यी १२ रोगको लागि फाइदाजनक…हेर्नुहोस् ।